Maalmahan, raadinta maaddooyinka caafimaadka ugu badani way sii kordhaysaa sidii hore. Marka ay timaado helitaanka qaabka jireed ee saxda ah ...
Hawlaha jimicsiga iyo wakhtiyada firaaqada waxay kaa dhigayaan inaad taam tahay oo aad diyaar ahaato, iyo si aad xawaaraha u sii wadato, waxaad u baahan tahay diyaar-garowga heerka koowaad! Hadday hikin tahay ...
Qurxinta marwalba maahan inay daasho oo waqti qaadato, sax? Xaqiiqdii, haddii aad ka fekereyso inaad gurigaaga siiso xoogaa qurxin ah, ...
6-da Qalabka & Qalabka aad Doonaysay Waa Kuwaan!
Markay gu ’soo socdaan, sidoo kale isbeddello cusub ayaa dhacaya iyo baahida loo qabo qalab cusub oo qurxoon. Aynu runta sheegno, aalado waxtar leh ayaa had iyo jeer wanaagsan in la haysto, a ...
Uma muuqan karto wax la mid ah, laakiin iswaafajinta labbiska ayaa ah garaacid xagga raaxada, ficil ahaanta iyo qaabka ah! Iyadoo aan loo eegin xilliga hadda lagu jiro, ...
Ma la yaabban tahay waxa carruurta iyo carruurtu u eg yihiin? Hagaag, maxaa kale hadii aysan aheyn ficil ahaan, raaxo, iyo shaqsiyan ?! Inta lagu jiro bilaha qabow ...
Miyuu xilli ciyaareedku noqdaa mid jilicsan oo moodada sidii hore! Haddii aadan wali helin wax hadiyad ah dhammaan ragga wanaagsan ee noloshaada, hadda waa fursaddaada inaad sameyso s ...
Waxyaabaha Muhiimka u ah Jiilaalka iyo Halkee laga Helaa! Iyada oo jiilaalku si wanaagsan u socdo, hal shay ayaa weli hubaal ah - had iyo jeer waa fiican tahay in lagu salaamo qaab! Laga soo bilaabo c ...